ILa Hermida Gorge, isimanga semvelo esinomlando omningi | Ukuhamba kwe-Absolut
Umhosha waseLa Hermida ungenye yezimangaliso zemvelo ezinikezwa yi Iziqhingi zaseYurophu. Yenziwe ngamaqoqo ama-gorges aholela kwelikhulu, nakho okuyi- I-Deva riverbed. Kungumgodi omkhulu wezindonga zamatshe e-limestone okuthi, kwezinye izindawo, zifinyelele kumamitha ayi-XNUMX ukusuka phezulu.
Inwebeka ngamakhilomitha angamashumi amabili nanye, okwenza kube ngumhosha isikhathi eside wabo bonke España. Ijoyina idolobha lase-Asturian lase Iphaneli ne-Cantabrian ye Amaphoyinti ngomgwaqo omkhulu kazwelonke u-621. Futhi kwakha indawo yemvelo ehlaba umxhwele, phakathi kokunye, emenyezelwe Indawo Yokubaluleka Komphakathi y Indawo Yokuvikela Ekhethekile Yezinyoni (ZEPA). Uma ufuna ukwazi umhosha waseLa Hermida, sikumema ukuthi uwuhlole nathi.
1 Yini ongayibona emhosheni waseLa Hermida
1.1 Amaphuzu wokubuka
1.3 Imizana yaseHermida gorge
2 Ongakudla ezigodini zomhosha waseHermida
3 Ungafika kanjani emhosheni weHermida
Yini ongayibona emhosheni waseLa Hermida
Into yokuqala evelele kulo mhosha yi- indawo yemvelo ebabazekayo futhi emangalisayo oyilungiselelayo. Ama-oki e-cork, ama-holm oak, ama-beeches nama-oki akhula emhosheni. Ngokufanayo, kuyikhaya lezilwane eziyingqayizivele lapho ama-chamois ngisho nebhere elinsundu ngezikhathi ezithile ligqame khona. Kepha ngaphezu kwakho konke, kuyisistimu yemvelo ebalulekile yezinkozi namanqe ama-subspecies anentshebe.
Kuwo wonke umhosha waseLa Hermida kunemibono eminingi ekuhlinzeka ngemibono emihle yezintaba zaseCantabrian. Gqama phakathi kwabo lowo waseSanta Catalina, eduze kakhulu lapho ungabona khona izinsalela zocingo Umgodi wokubhowula wamaMoor, inqaba yasendulo yama-Arab kusukela ngekhulu lesi-XNUMX. Futhi leyo kaCastro Verdeja, etholakala edolobheni laseLinares.
Uma uthanda i-adventure, kufanele wazi ukuthi emhosheni yi nge-ferrata yaseLa Hermida, engenye yezokuqala ukwenziwa eCantabria. Amabhuloho ayo aseTibetan awafanele wonke umuntu, njengoba emiswe phakathi kwezintaba eziphakeme. Eduze kwesinye sazo uzothola izitebhisi ezehla ziye ekuphakameni komfula iDeva.
Amachibi akha lokhu ajabulele udumo kusukela ezikhathini zasendulo. Bagcwele iziphethu ezishisayo lokho kugeleza cishe cishe ngamashumi ayisithupha ama-degree centigrade. Eqinisweni, kuze kube ngawo-2006 kwakukhona i-spa ephumelele kakhulu endaweni eyavuselelwa futhi yavulwa kabusha ngo-XNUMX.
Ngakolunye uhlangothi, yize kungabonakala kungajwayelekile ngenxa ye-orography, ungajabulela nezikhumbuzo emhosheni waseLa Hermida. Ungabavakashela emadolobheni akuyo. Masibazi futhi.
Imizana yaseHermida gorge
Uma uhamba umhosha oqonde enyakatho-ningizimu, ungathola amadolobha amaningana. Akubona bonke abasemfuleni Deva, ezinye zinwebeka emithambekeni eziyiklamayo, kepha onke angamadolobha amahle kakhulu.
Leli dolobha lingumnyango osuka ogwini uye emhosheni waseLa Hermida, kanye nedolobha lokuqala eCantabria ngemuva kokushiya i-Asturias. Ukukhanga kwayo okukhulu kunakho konke UTina Mayor estuary, isikebhe lapho iDeva igelezela khona oLwandle lwaseCantabrian. Ngakolunye uhlangothi i- IKapa laseSan Emeterio, lapho kukhona indlu yesibani okubukeka sengathi isizowela olwandle ngenxa yokwehla kwendawo lapho itholakala khona. Kakade endaweni, usunayo i- isigqoko somlando eyakhiwe izindlu ezijwayelekile zasogwini lwaseSantander.
Inhlokodolobha yomkhandlu wase-Asturian we I-Peñamella Baja Ingenye yezindawo eziyintandokazi zabagibeli bezintaba. Ngalesi sizathu, eminyakeni yamuva nje yathuthukiswa ngokuvakasha kwezokuvakasha. Ungabona futhi kuleli dolobha i- isigodlo saseSan Román, isakhiwo sokwakhiwa kwendabuko esakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa futhi sakhiwa indlu yasemakhaya kanye nesonto elizimele.
Akusona isigodlo kuphela kumasipala. Vuliwe Ukushiya une lo ovela ePalenque y owaseLa Cajiga. Kepha okubaluleke kakhulu yi umhume waseLa Loja, igalari engaphansi komhlaba emamitha angaba yikhulu lapho kukhona Imidwebo yomhume wasePaleolithic.
UTina Mayor estuary
Idolobha elinikeza igama lalo umhosha lingelomasipala waseCantabrian wase I-Peñarrubia. ELa Hermida kufanele ubone i- Isonto lesifunda, eyakhiwe ngo-1970 kodwa ngesitayela esihle sesimanjemanje. Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi ngaphakathi kunesithombe saseLa Dolorosa esivela ngekhulu le-XNUMX. Ungavakashela futhi isizinda seSan Pelayo, cishe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ubudala kanye ne- I-Spa yemithombo eshisayo esakutshela ngayo phambilini. Itholakala esakhiweni sekhulu le-XNUMX.
Kutholakale emkhandlwini ofanayo wePeñarrubia, leli dolobha elincane line- isizinda seSan Pedro, yesitayela sama-Romanesque futhi enezinto eziqoshwe eziningana. Phakathi kwalokhu, kuyabonakala leyo kaSan Pablo, ephendula i-Gothic-Flemish yekhulu le-XV futhi i-polychrome.
Inhlokodolobha yomkhandlu wasePeñarrubia, itholakala egqumeni elibusa umhosha waseLa Hermida. Ukusuka kuleli dolobha ungakhuphukela ku IVirdiu de Treslajorá isiqongo, cishe amamitha angamakhulu ayishumi nambili, futhi, ngokuqhubeka ukhuphuke intaba, uzofika ku I-Gamonal, cishe angamakhulu ayishumi nantathu.
KuLinares, ungabona futhi i- Isonto laseSan Andrés, okubandakanya izinsalela zenye iRomanesque, kanye umbhoshongo wepontoon, isakhiwo se-crenellated sekhulu le-XNUMX okungukuthi Impahla Yezintshisekelo Zamasiko kusukela ngo-1992. Abokugcina babengababizwa kanjalo imibhoshongo yokuzivikela yaseCantabria, eyakhelwe ukuvikelwa yimindeni ehloniphekile yendawo futhi inomthelela omkhulu ekuthuthukiseni i izakhiwo zezintaba kamuva.
Ohambweni lwethu olunqamula emhosheni waseHermida, safika eLebeña, indawo yokungena emhosheni oseningizimu. Kuleli dolobha elincane elinabantu abangaba yikhulu, kunelitshe eliyigugu langaphambi kweRomanesque: the Isonto laseSanta Maria, okuyiwo futhi Impahla Yezintshisekelo Zamasiko.
USanta Maria de Lebeña
Ithempeli liphendula ngokuqonde ngqo kulokho namuhla okubizwa ngokuthi ubuciko bokuphindaphinda futhi okwabizwa ngaphambili mozarabic. Lokho kusho ukuthi, isitayela sokwakha sakhula phakathi kwekhulu lesi-XNUMX nele-XNUMX ezindaweni lapho amaKrestu ahlala khona njengoba ayedlulela ngaseningizimu yeNhlonhlo yase-Iberia.
Ngakho-ke, inohlelo lwe-basilica olunama-naves amathathu anenhloko yebhodi eyakhiwe amasonto amaningi we-apsidal ahlukaniswe ngamakhothamo ayisiyingi. Kepha okuhlukile kakhulu ukuthi kungokokuqala eSpain lapho okubizwa khona Insika eyinhlanganisela yesiphambano.
Iphinde iqhakambise i- i-altare eyinhloko ye-baroque, ngokhuni lwe-polychrome nangomfanekiso we Intombi yaseBhetlehema, iSpanish-Flemish eqoshwe ngekhulu le-XNUMX. Emasontweni, unezinto ezimbili ezincane zesitayela se-Renaissance. Eduze kwesonto, bekukhona i- yew eyaziwa ngokuthi ekaLebeña, eyayingenye yezindala kunazo zonke eCantabria. Ngeshwa, yawa eminyakeni embalwa edlule.
Yize leli dolobha laseCantabrian lingekho emhosheni waseLa Hermida, kubalulekile ukuthi ulivakashele uma udlula kuleyo ndawo. Ngoba kuyisimangaliso seqiniso. Okokuqala, yonke i-villa inesigaba se- Isethi yomlando ngokusebenzisa izindawo ezifana nalezi ze abakwaSolana o ILanga, ngemigwaqo yalo eyakhiwe ngamatshe egudla ngaphansi kwamakhothamo.
Futhi, kufanele ubone ifayela le- Umbhoshongo we-Infantado, uthango lwekhulu le-XNUMX okwakungoluka-Íñigo López de Mendoza, imbongi yangesikhathi esidlule eyaziwa kangcono ngokuthi UMarquis waseSantillana. Ukwakhiwa kwe-ashlar okuqiniswe i-ashlar kuqediwe ku-barbican eqhubekayo ethweswe imiqhele yempi. Kusukela ngo-1985 kunjalo Impahla Yezintshisekelo Zamasiko.
Kufanele futhi uvakashele i- Isonto laseSan Vicente, eyakhiwa phakathi kwekhulu leshumi nane kanye neshumi nesishiyagalombili ngakho-ke iyinhlanganisela yezitayela zamaGothic, Renaissance neBaroque. Futhi ithole isilinganiso sempahla, lapho kufanele khona, Isikhumbuzo Somlando Wobuciko.
Ekugcineni, kumakhelwane Umthombo we kukhona ifayela le- I-Cableway lokho kukhuphukela kufayela le- Mirador del Ikhebula. Uma ufuna ukuba nombono ongenakuhlulwa we Isigodi saseLiébana ikakhulukazi ne Iziqhingi zaseYurophu Ngokuvamile, kufanele ukhuphukele kule ndawo yokuhlola.
Kwabahambahambayo kuningi imizila okuholela kuye. Futhi, kulabo abangakujwayele kangako ukuhamba, kukhona imoto yekhebula uqobo, enqoba ukwehla cishe kwengxenye yemayela ngemizuzu emithathu nje. Kodwa-ke, uma unaka ukuthi isisekelo siqhele ngamamitha ayinkulungwane, uzobona ukuthi umbono oshiwo ngenhla weKhebula utholakala inkulungwane namakhulu ayisishiyagalombili. Cabanga nge izithombe ongayithola kule ndawo yokubuka.
Njengoba ukwazi ukubona, kuningi izimangaliso zemvelo nezokwakha lokho kukunikeza umhosha waseLa Hermida namadolobha awuphawulayo. Kepha, ngaphezu kwalokho, indawo ivelele ngokuba nenhle kakhulu gastronomy. Futhi ngemuva kokuvakashelwa okuningi, uzofuna ukudla okuthile.
Ongakudla ezigodini zomhosha waseHermida
Omunye wemikhiqizo ejwayelekile yale ndawo yinhle trout emfuleni iDeva. Eqinisweni, eLebeña kukhona i-trout ebalulekile egcinwayo futhi nasemhosheni kunetshe lesikhumbuzo lale nhlanzi. Kepha i isalimoni.
Ngokufanayo, amadolobha omhosha waseLa Hermida avelela izinhlobo zawo zoshizi. Isibonelo, kuma-Panes adumile Monk ushizi, enziwe ngobisi lwenkomo. Udumo oluningi lusenayo i- I-Picón Tresviso-Vejes futhi i ngabhema u-valiva.
Ngokuqondene nezitsha ezijwayelekile, i- i-boronos noma isinkwa esigcwele igazi namafutha engulube, u-anyanisi, iparsley nosawoti. Kepha ngaphezu kwakho konke, akumele sikhohlwe ukuthi iPotes, etholakala ekugcineni komunye umhosha waseLa Hermida, ingeye Isifunda saseLiébana, osekumenyezelwe ngakho ubuhle begastronomic.
Ngakho-ke, ekuvakasheni kwakho emhosheni kufanele uzame okuhle lebaniego stew, okwenziwa njengentaba kepha kufakwa ubhontshisi esikhundleni samantshontsho akhuliswe ezingadini zendawo. Ngokuqondene nenyama, kokubili inyama yenkomo, iwundlu noma izinyane nomdlalo kuyabonakala, ikakhulukazi kusuka ku- ingulube yasendle futhi of izinyamazane. Ngaphezu kwalokho, i- ama-sausages, phakathi kwayo okuvelele i umvimba wegazi lokho kwenziwa ngendlela ekhethekile.
Ekugcineni, maqondana nobumnandi, i- honey lendawo. Ngokufanayo, ungathatha ifayela le- i-curd noma a I-Curd. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa okungathandeki kangako futhi okumnandi izibopho ye-Unquera kanye ne ama-frisuelos kaLiébana. Futhi ukuze uqedele ukudla okumnandi kangako, ungathola ucingo itiye lasethekwini newayini elihle elimnandi abomdabu ababiza ngalo ubhontshisi noma okuhle kakhulu pomace.
Eqinisweni, amaPotes abamba umkhosi owenzelwe lesi siphuzo minyaka yonke. I- Umkhosi we-Orujo Kwenzeka ngempelasonto yesibili kaNovemba, ngemiklomelo yama- "orujeros amadala" kanye nokukhanyiswa kwe-Alquitaras lapho kutshalwa khona lo tshwala. Lo mgubho wamenyezelwa ngonyaka we-2012 Umkhosi Wentshisekelo Yezokuvakasha Kazwelonke.
ULinares kanye nePicos de Europa
Ungafika kanjani emhosheni weHermida
Ukuphela kwendlela yokufika kule ndawo yePicos de Europa kungukuthi umgwaqo omkhulu. Ukufika ku- Iphaneli funa Asturias, kufanele uzungeze ngomgwaqo omkhulu waseCantabrian noma umgwaqo omkhulu A-8. Ekuphakameni kwe-Unquera, kufanele ucishe nge- N-621 lokho kuzokusa ngqo enhlokodolobha yasePeñamellera Baja.
Ungalandela umzila ohlukile ukufika eLebeña noma ePotes kusuka eCantabria. Kodwa-ke, uzohamba emigwaqweni yesifunda esesimweni esibi kakhulu. Ngakho-ke, isincomo sethu ukuthi nawe uye e-Unquera futhi lapho uphambuke ngokufanayo N-621. Ukuqhubeka nalokhu, ngemuva kokudlula womabili ama-Panes nomhosha waseLa Hermida uqobo, uzofinyelela Lebeña bese ku Amaphoyinti. Umgwaqo usesimweni esingcono futhi uyindlela eqonde kakhulu.
Ekuphetheni, uma ufuna indawo ekunika yona Ukubukwa okumangalisayo yesimo sasendle futhi esinamandla, esifihlekile nesingalindelekile izikhumbuzo lokho kuzokumangaza futhi a gastronomy Kuyavumelana futhi kumnandi, indawo oya kuyo ngumhosha waseLa Hermida, engxenyeni yePicos de Europa eyakha umngcele wemvelo phakathi kwe-Asturias neCantabria.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » ILa Hermida Gorge